Kitra – Afrikanina : nandresy ny Cnaps Sport – nanao sahala ny Elgeco Plus | NewsMada
Kitra – Afrikanina : nandresy ny Cnaps Sport – nanao sahala ny Elgeco Plus
Tsara fanombohana ny Cnaps Sport teo amin’ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra. Nandresy ny Township Rollers avy atsy Botsoanà, izy ireo tamin’izany. Nirava sahala kosa ny fihaonana teo amin’ny Elgeco Plus sy ny Supersport United avy atsy Afrika Atsimo. Samy mbola ho henjana ny miandry ny ekipa roa tonta amin’ny lalao miverina.
Fandresena ambivitra, 2 noho 1 nandresen’ny Cnaps Sport ny Township Rollers, avy any Botsoanà, nandritra ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Fihaonana natao teo amin’ny kianja Complexe sportif Vontovorona, ny asabotsy lasa teo. Vokatra, tsy mbola ampy hiakarana amin’ny dingana manaraka satria mbola hiatrika ny lalao miverina any Gaborone, ny ekipa tompondakan’i Madagasikara afaka herinandro. Ilay baolina tokana tafiditry ry zareo teto, no mety hahasarotra ny fihaonana.
Na izany aza, azo atao tsara ny manantena hanohizana ny lalana satria mila mampiditra baolina iray fotsiny ny Cnaps amin’ity lalao miverina ity, na mitady ady sahala dia tafita. Ry zareo Botsoane, rahateo klioba azo resena tsara fa tsy dia hoe maozatra akory, raha ny fomba filalao nasehony no jerena.
Raha hiverenana kosa ny endri-dalao, natao ny asabotsy lasa teo, nanjakan’ny Malagasy ny 90 mn. Betsaka ireo baolina tokony ho tafiditra saingy be loatra ny fikoropahana sy ny fahamehan’ny lohalaharana ka tsy maty ireo baolina. Ny Cnaps Sport no nanokatra ny isa voalohany, tamin’ny alalan’i Francis, teo amin’ny fanampim-potoana mialoha ny fialan-tsasatra (45 + 2 mn).
Io tombon’isa tokana io koa no nentin’ny roa tonta niala sasatra. Nanolo mpilalao ry zareo Botsoane. Niditra i Segolame Boy naka ny toeran’i Thato Bolweng. Nahitam-bokany izany fanoloana mpilalao nataon’ny mpanazatra izany, satria i Segolame Boy no nanasahala ny isa ho 1 sy 1 teo amin’ny minitra faha-69 rehefa nisy fitavozavozana teo amin’ny vodilaharana sy ny mpiandry tsatobin’ny Cnaps Sport.
Tsy nahakivy ny mpilalaon’i Typeh izany fa niezaka nanindry sy nifehy ny lalao hatrany izy ireo. Nampitombo ny isa i Njiva, teo amin’ny minitra faha-76, taorian’ny tolotra tsara nataon’i Mika. Nitarika tamin’ny isa 2 no ho 1 ny Malagasy teo izay mbola niezaka nitady hirika hamonoana baolina fanintelony, saingy tsy nanao afa-tsy ny nanidy trano sisa ry zareo Botsoane.